Ingxelo yemisebenzi yase-US: Ukubuyiselwa okungalinganiyo kwezolonwabo kunye nokwamkela iindwendwe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Ingxelo yemisebenzi yase-US: Ukubuyiselwa okungalinganiyo kwezolonwabo kunye nokwamkela iindwendwe
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Ukuqasha imoto • Ukubambisa • Culinary • ukonwatyiswa • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iindaba • abantu • Ukuhamba ngololiwe • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Kusekho isidingo esikhulu seCongress yokubonelela ngoncedo olongezelelekileyo lomdibaniso kunye nenkuthazo yokugcina amashishini axhomekeke kuhambo de kube kubuyiselwe ngokupheleleyo-okuya kufuna ukubuya kohambo lweshishini kunye nohambo lwangaphandle olungenayo.
Ukuphoxeka Ingxelo yemisebenzi kaSeptemba ikhutshiwe yi-Bureau of Labor Statistics yase-US.
Icandelo le-US Leisure kunye ne-Hospitality libone imisebenzi embalwa yokongezwa ngo-Septemba.
Iingeniso ezingalinganiyo ikakhulu zibangelwa yintsholongwane eyachaphazela uhambo ekupheleni kwehlobo.
Ukuhamba kwe-US ukhuphe le ngxelo ilandelayo namhlanje ngengxelo yemisebenzi kaSeptemba ekhutshwe yi-Bureau of Labor Statistics yase-US:
“Uhlalutyo lwengqesho lwanamhlanje lukhomba ekuvuseleleni okungalinganiyo kwicandelo lezolonwabo kunye neleNdwendwe, nelithe labona imisebenzi embalwa kongezwa ngoSeptemba (ngama-74,000 kuphela) xa kuthelekiswa neenyanga ezidlulileyo apho kwafunyanwa amakhulu amawaka emisebenzi. Ezi zibonelelo zingalinganiyo ikakhulu zibangelwa yintsholongwane eyachaphazela uhambo ekupheleni kwehlobo.
"Kusasele isidingo esikhulu seCongress yokubonelela ngoncedo olongezelelekileyo lomdibaniso kunye nenkuthazo yokugcina amashishini axhomekeke kuhambo kude kufike ukubuyela kwimeko yesiqhelo - oko kuyakufuna ukubuya kohambo lweshishini kunye nokuhamba kwamanye amazwe."
Ngokwengxelo yemisebenzi kaSeptemba, uqoqosho lwase-US lwadala imisebenzi ngesantya esisezantsi kunoko bekulindelwe ngo-Septemba, uphawu olungenathemba malunga nemeko yezoqoqosho nangona itotali ibibuyiselwe umva kakhulu kukuhla okukhulu kwengqesho kurhulumente.
Imirhumo ye-nonfarm inyuke nge-194,000 nje ngenyanga, xa kuthelekiswa noqikelelo lukaDow Jones lwama-500,000, i ISebe lezabaSebenzi ingxelo.
Ngaphandle kwemisebenzi ebuthathaka, umvuzo unyuke kakhulu. Inzuzo yenyanga ye-0.6% inyanzelise ukunyuka konyaka-ukuya kwi-4.6% njengoko iinkampani zisebenzisa ukunyuswa kwemivuzo ukulwa nokunqongophala kwabasebenzi okuqhubekayo. Abasebenzi abakhoyo bancipha nge-183,000 ngo-Septemba kwaye bayi-3.1 yezigidi abanentloni apho babekho ngoFebruwari 2020, ngaphambi kokuba kubhengezwe ubhubhane.
Ingxelo iza ngexesha elibalulekileyo kuqoqosho, ngedatha yakutshanje ebonisa inkcitho yomthengi eqinileyo ngaphandle kokunyuka kwamaxabiso, ukukhula kwicandelo lokuvelisa kunye neenkonzo, kunye nokunyuka kweendleko zezindlu.